Lalao Ravalomanana : iraka avy amin’Andriamanitra ! – MyDago.com aime Madagascar
Lalao Ravalomanana : iraka avy amin’Andriamanitra !
Tonga nanotrona ny fankalazana ny fetin’ny fahaleovan-tena eto Morondava Ramatoa Lalao Ravalomanana. Niavaka izany fankalazana izany satria dia niara-niombom-bavaka tamin’ny mpino kristiana marobe tao amin’ny FJKM Mahagaga ny tenany niaraka tamin’ny delegasiona notarihiny.
Ny bokin’ny Samoela II : 16-20 no nitondrana ny hafatra. Ny mpitandrina Aimée Claire no nitondra ny famakafakana ka notsiahiviny tamin’izany ny tantaran’i David mpanjaka. Avy amin’Andriamanitra ny fahefan’i David ary tena niroborobo sy nandroso ny fanjakan’Israely tamin’izany. Nahatsiaro ho sambatra David mpanjaka ary nikasa hanangana tempoly. Ny olom-boafidy ato anatin’ny soratra masina dia samy naniry hanao toy izany daholo saingy tendry avy amin’Andriamanitra ihany vao mahavita izany hoy izy. Ny taranaky David mpanjaka no nomen’Andriamanitra fitahiana hahavita izany tempoly izany. Manana ny laharam-pahamehany sy ny fandaharam-potoany anefa Andriamanitra. Izany tantaran’ny soratra masina izany no entiny nanoharana ny filoha Ravalomanana sy Ramatoa Lalao Ravalomanana. Matoa ianao manana fikasana tsara hirotsaka ho fidiana dia tendry sy fitahiana avy amin’Andriamanitra izany, hoy hatrany ny mpitandrina koa dia mirary soa sy mitso-drano anao izahay amin’izany. Nentin’ny fiangonana am-bavaka teto ny filoha Ravalomanana any Afrika Atsimo sy ny kandidà Lalao Ravalomanana. Ny filohan’ny sinodam-parintany eto Morondava ihany koa dia nitondra fankasitrahana sy nitrotro am-bavaka ny filoha lefitry ny FJKM mivady.
Tamin’ny fandraisam-pitenenan’I Neny kosa dia nambarany fa rehefa mitrotro am-bavaka ny firenena toy izao izy dia miha mahazo hery hatrany. Velom-panontaniana hatrany ny tenako hoe inona no azoko atao amin’ny firenenko? Mahatsiaron-tena aho, hoy Neny, fa iraka avy amin’Andriamanitra izany. Izany no mahatonga ahy hijoro toy izao. Vonona aho hangana ny rava, vonona aho hangana ny firenena vanona. Tsy adidiko izaho samy irery anefa izany hoy izy fa adidiko izaho sy ianareo. Mbola resaka ara-nofo anefa izany fa araka ny fahendrena Malagasy dia ny fanahy no maha olona, ary ny nofo tsy mahaleo ny fanahy. Mila manavao isa-maraina ny fanoloran-tena isika hoy I Neny.
Marihina moa fa mbola trano hazo ity fiangonana ity tamin’ny taona 2006 raha notsidihin’ny filoha Ravalomanana tamin’izany fotoana izany izay nomarihin’ny mpitandrina fa nisy nandoro ka may kila forehitra tamin’izany . Tafatsangana soa aman-tsara anefa ankehitriny ny FJKM Mahagaga ary nanao ezaka ho fanamboarana ny ankany izy ireo tamin’ity androany ity. Ramatoa Lalao Ravalomanana moa dia nitondra ny anjara birikiny tamin’izany.
8 réflexions sur « Lalao Ravalomanana : iraka avy amin’Andriamanitra ! »
ANdiamanitra hanome hery sy tanjaka Antsuka Rehetra fa mihamafy ny sy mihamaro ny andraikitra ho sahanintsika
Misaotra an ‘I NENY tsy mikely Soroka Ary tandremo tsara ny fahsalamanao !
I Neny ve no iraka avy amin’Andriamanitra ry Solo Razafy, sa ny finiavany hanasoa ny tanindrazany no sitrak’Andriamanitra ?
Miangavy re, ary mba mitandrema ihany amin’izay soratra apetraka, fa efa anisan’ny nanenjehan’ny sasany an’ny Filoha Ravalomanana io resaka Fivavahana io e !
26 juin 2013 à 14 h 30 min
Fanambarana nataon’i Lalao Ravalomanana
ANTANANARIVO, Madagascar, June 26, 2013 /PRNewswire/ —
Madagascar’s Presidential candidate, Lalao Ravalomanana, is using the country’s Independence Day today to call for free and fair elections and an end to political turmoil.
Former first lady, Mme Ravalomanana, has pledged to return Madagascar to political stability and prosperity in the country’s first democratic elections following a military coup in 2009.
Speaking in Antananarivo today, Mme Ravalomanana said: « Independence Day is a day for the Malagasy people to unite in peace and optimism and showcase our beloved country to the world. But true independence can only be achieved in a place that is democratic and politically stable. Our country has so much to offer, from our cultural heritage to our rich lands and sea, but after years of poor governance, Madagascar has lost its credibility on the international stage.
« I have been saddened to see our Independence Day celebrations boycotted by foreign embassies in recent years, although this is understandable given their objection to the current, military-backed junta. As President, I will make it a priority to rebuild relations with these embassies, so that next year our Independence Day will be the truly international event it deserves. »
If successful, Mme Ravalomanana will become the third female ruler in Africa, alongside President Ellen Johnson Sirleaf of Liberia and President Joyce Banda of Malawi, building on Madagascar’s rich historical heritage of female leaders and making a strong visible statement in support of the country’s women.
Mme Ravalomanana was first lady of Madagascar during her husband’s presidency from 2002-2009, before he was ousted by the current incumbent, who is also running in the elections despite giving assurances he would abstain.
nY 26 jUIN HO AN’i Bandin’ny Foza e! io ilay mamoka azy !
aleo mijery an’i Lafy8 ry zalahy RAHA te hahita ilay « Jeneraly » (Contre Amiral mantsy e ! 😉 ) a !
27 juin 2013 à 6 h 38 min
Aoka mba tsyhiditra lalina @ fahamazinan-tsaina tsy tsara hoa’ny firenentsiaka izany. Ny finoana rehefa tena miraikitra @ fivavahana dia tena manampi-masy tsy misy ohatr’izany. Tsy misy intsony izany hoe irak’A/tra izany. Fa ny tena A/tra dia ny vahoaka, ary ny vahoaka no haniraka an’i Ramatoa Lalao Ravalomanana hiala ato @ ity krizy ity.
Isika izao mbola ao anaty krizy ary i Neny irery no ahatafavoaka antsika ato @ ity krizy ka aoka samy hanohana azy avokoa ary hanao izay handreseny rehefa tonga ny fotoana.
Précédent Article précédent : I Neny no masoandro hitondra hazavana ho an’I Morondava
Suivant Article suivant : Tohodranon’i Dabara – Menabe : nijery ifotony ny olana i Neny